Trondro sy haranjono
2013-02-27 @ 21:08 in Andavanandro
Noho ny fitiavana mamaky teny fahatanora dia tsaroana fa nisy fomba fitenyï¿½ shinoa iray izay mitovitovy amin'ny hoe raha noana ny namanao omeo trondro izy,ï¿½ raha te-hihinana trondro isan'andro kosa izy omeo haranjono. Nifanahatahaka tamin'izany ihany koa ny an'Andrianampoinimerina fa raha nisy tantara novakiana hoe raha nisy olona nankao aminy ka mangataka aminy dia omeny angady. Fehin'ireo ohatra roa noraisiko ireo dia ny olona hendry manoro lalana ny namany amin'ny tokony hiasan'ilay namany ary manome fitaovana ahafahany manao izany asa izany ho fivelomana maharitra ka tsy hiantehitra amin'ny hafa intsony.
Fa raha mitodika ny amin'izao fotoana izao kosa, moa ve mba hita taratra amin'ny fanaon'ny olona, ary indrindra ireo Olobe eto amin'ny firenena,ï¿½ izany fomba fisainana izany? Manontany satria toa zary fomba fanao ilay fampianteherana ny olona amin'ny zavatra kely tsy mahavita taona, tsy mahavita iray volana na herinandro akory aza. Dia rehefa lany iny dia ahoana indray ny tohiny ? Ho tonga indray amin'ny fanampiana vonjy tavan'andro ve ? Ataoko fa raha tahaka izany hatrany no atao dia ho sorena ihany ny iafaran'ny mpanome.
Etsy andaniny ny Malagasy ihany koa olon'ny fo ka midodododo rehefa misy ny tra-boina saingy mailo dia mailo amin'izay iafaran'ny fanomezana ataony. Efa tsy miresaka intsony aho eto hoe angaha tsy misy ny teti-bola manokana ho fanampiana izay tra-boina tahaka ireo nandalovan'ny rivo-doza tany amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny manodidina azy. Sa moa efa akaiky ny fifidianana dia lazaina fa vola manokana indray izay tokony ho avy amin'ny volam-bahoaka ? Raha tena tiana tokoa ny handrosoan'ny faritra rehetra manerana an'i Madagasikara, tsy aleo ve omena fitaovana sy fahalalana hanorenana foto-drafitrasa mafy sy manara-penitra (indrisy lasa fomba fanesoan'ny sasany ity fomba fiteny malagasy nanana ny hajany ity) enti-manohitra sy misoroka ny karazan-doza voajanahary tsy maintsy handalo isan-taona ny olona sy ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
Ny toe-tsain'ny maro mihitsy manko no efa simba ka ny mankany amin'ny fandrosoana indray no hala fa ilay tia kely no mahafinaritra. Tamin'ny fitondrana teo aloha,ï¿½ raha nisy ny nanangana trano mahazaka ny fifofofofon'ny rivotra mahery dia toa tsy narisika ho amin'izany ny maro satria tsy hisy intsony ny fanampiana rehefa tsy rava trano. Lazaina fa mitetika ny tsy hanao fanampiana intsony. Niady hevitra mihitsy aho tamin'izany fa maro kokoa ny namaly nanao hoe : ' Tsy dia misy ilaina izany loatra sady tsy hohenoin'ny olona amin'izany ianao satria ny hahazo fanampiana ihany no tena mahamaika ny olona. Tsy maintsy hisy hatrany ny hidodododo hitondra fanampiana fa mba hafa ihany koa izany mahazo zava-baovao tsy nisasarana loatra izany'. Tsy niteny intsony aho na dia mihorakoraka mafy tsy mety manaiky izany fomba fisainana izany aza ny ao anatiko ao .
Hoy ilay eritreritro hoe dia tena izany tokoa ve no tena izy sa atao izay ampisainana ny olona ho amin'izany satria raha misy ny fanampiana dia tsy resy lahatra loatra aho fa ho tonga any amin'izay iantefany avokoa ireny. Manahy aza aho fa ny potipotiny sisa no tonga any,ï¿½ raha ho tonga aza. Lasa any amin'ny tantara iray ao amin'ny baiboly ny saiko hoe lasa mivarotra ny fizokiana amin'ny zava-matsiro vetivety tahaka an'i Esao tokoa ve ny Malagasy? Firenena voasafotry ny reniranon'i Neily hatrany i Ejipta fahagola fa ny fitadiavany tsy mitsahatra ny vahaolana tsy hahapotika ny voliny sy ny fonenany no naha-firenena goavana azy fahagola . Tsy ny fahiny ihany fa na ny ankehitriny aza . Firenena anjakazakan'ny fihovitrovitry ny tany i Japana fa tsy nanakana azy tsy ho firenena mandroso izany satria ampiasainy ny sainy hikaroka ny vahaolana amin'ny voina tsy maintsy mandalo amin'ny taniny . Fa isika kosa ary mba aiza ho aiza amin'izany?
Jentilisa, 27ï¿½ febroary 2013